Ka shaqeynaya horumar joogta ah oo ka socda fasalada 3aad ilaa fasalka 3, McKnight wuxuu doonayaa inuu kordhiyo boqolkiiba ardayda akhrinta fasalka saddexaad ee kuyaal magaalooyinka Twin Cities. Iyada oo taageero mashruuc la leh McKnight, Brooklyn Xarunta Dugsiyada Madaxa Bannaan # 286 waxa uu abuurayaa qaab cusub oo akhris-qoris ah, kaas oo ku dhex jira nidaamkiisa dhammaystiran ee waxbarashada tacliinta.
Qaab-dhismeedka Xarunta Brooklyn wuxuu ku jiri doonaa habab isku xiran oo lagu barayo tabaha akhrinta xeeladaha iyo xirfadaha; hagaajinta marxalada u dhaxaysa fasalada iyo heerarka fasalka; iyo qiimeynta isticmaalka PreK-6, iyo sidoo kale nidaamyada warbixinta si ay ula wadaagaan horumarka waalidiinta. "Waxyaabaha waaweyni waxay dhacaan marka dad weyni ay isku daraan hantidooda, kartida, xirfadaha, iyo lacagta - waxayna wada shaqeeyaan si ay u sameeyaan farqi u dhexeeya dadka dhalinyarada ah," ayuu yiri Maamulaha Cusub ee Brooklyn Keith Lester. "Xaqiijinta Xarunta McKnight Foundation oo leh khibrad iyo hogaaminta Machadka Magaaleynta ee Isku-dhafka ah oo ay weheliso xamaasada, xirfadaha, iyo ballanqaadka shaqaalaha Earle Brown waxay xaqiijin doonaan in waxyaabo badani ay dhici doonaan caruurteena, Pre-Kindergarten iyo wixii ka dambeeya."
Isku-dubaridka wadatashiga takhasuska, cilmi-baarayaasha, iyo macallimiinta iskuulka dhexdiisa, qaab-dhismeedku wuxuu isku habayn doonaa dhammaan qaybaha nidaamka waxbarashadda degmada ee akhris-qorista, kaas oo ka kooban dhammaan qaybaha iskudhafka ah ee iskoolka iyo jaaliyada si wada jir ah u wada shaqeynaya si ay ugu guulaystaan ardayda fasalka saddexaad. Maalgelinta McKnight waxay diiradda saari doontaa iskuulka hal dugsi ee PreK-6. Earle Brown wuxuu u adeegaa 1,132 arday, oo ay ku jiraan habka PreK ee dugsiga.